Avy amin’ny tontolon’ny bilaogy Jordaniana – okt 2005 · Global Voices teny Malagasy
Avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Jordaniana – okt 2005
Voadika ny 15 Novambra 2018 7:43 GMT
Maneho hevitra momba ny loza maneran-tany misy ankehitriny ny tontolon'ny blaogy Jordaniana. Ahmad Humeid manolotra ny fiaraha-miory tamin'ny Rivo-doza Katrina, ary mitsikera ny ezaka fanampiana ho “mahonena”, sy manamarika fa “ny tena mampalahelo indrindra dia ireo fotsy hoditra afaka nandositra raha tavela kosa ny mahantra mainty hoditra.” Jameed manipika ihany koa fa voina mahazo ny olombelona ny voina olombelona. Yazan Malakha mibilaogy indray ao amin'ny Via Roads to Iraq manamarika ireo “mariky ny tsy firaharahiana amin'ny fiainana Arabo ao amin'ny gazety Amerikanina elatra havanana ary kely fa tsy azo tsinontsinoavina ny gazety Israeliana rehetra, ho an'ny vazivazy tandrefana rehetra momba ny demokrasia sy ny fahalalahana, dia tsy isalasalana fa mbola mitoetra ny karazana fanavakavaham-bolonkoditra maneran-tany. “
Haitham ao amin'ny bilaogy Sabbah manamarika ny tsy fampiharan'ny Miozolomana ny anti-semitisma araka ny itiavan'ny media Tandrefana manao dokambarotra izany, ary mizara vaovao vitsivitsy ao an-toerana- “Tarihan'i Huda Azra Nono, vehivavy jiosy avy amin'ny vondrom-piarahamonina Jiosy Bahrainita bitika kely ny Fikambanan'ny mpandala ny zon'olombelona ao Bahrain amin'izao fotoana izao. “
Beisan, mandritra izany fotoana izany, manoratra ny fanantenany fa ho tsara kokoa noho ny tamin'ny taona 2004 ny taona 2005 saingy hita fa tsy ilaina izany fanantenana izany noho ny famonoana an'i Hariri, ny fifanosehana nahafaty olona tany Iraka, ary ny Rivo-doza Katrina.
Eo amin'ny sehatra ara-kolontsaina, namoaka lahatsoratra momba ny Alina Ara-kolontsaina Arabo izay natao tany Irlandy ho anisan'ny lasin'ny tanora i Lina, ary manontany tena hoe “mandra-pahoviana no hiaretan'ity lova manan-karena mahafinaritra ity manoloana ny fahasimban'ny kolontsaina?” Nilaza ihany koa izy fa tena faly mahita ny fanatontosana ao amin'ny Ranomasina Maty ny Forum Ara-Kolombiana Iraisam-pirenena Andiany faha-2. Lulu ao amin'ny CafeLulu miresaka momba ny fandaharana amin'ny fahitalavitra mitondra ny lohateny hoe Pickles, Inc.”, raha manamarika kosa i S.C. ao amin'ny Utopia fa ity taona ity no ho tsingerintaonan'ny Fetiben'ny Sarimihetsika ho an'ny Vehivavy ao Shashat ao Palestina, izay mikendry ny hanentana ny vahoaka amin'ny fahaiza-mamorona eo amin'ny vehivavy sy ny fiantraikan'ny fisoloan-tenan'ny vehivavy. Madas indray mandinika fanontaniana tena mahaliana iray: “Oviana isika no ho lasa Arabo?”, Ary nilaza fa “ny hevitra momba ny maha-Arabo dia tsy vaovao intsony.”
Mandritra izany, mizara ny zavatra niainany ny roa amin'ireo mpamorona ny tontolon'ny bilaogy Jordaniana. Amin Matalqa maneho ny hafaliany amin'ny fiandohan'ny taona voalohany ao amin'ny American Film Institute ary manome vaovao tsy tapaka ho antsika. Etsy ankilany, Laith Majali mamela antsika hijery ny fomba nanombohan'ny asany amin'ny maha-tonian-dahatsoratra ary nizara ny sariny maka tahaka endrika olo-malaza.
Nambara fa hotontosaina amin'ny 14 Septambra ny fihaonan'ny bilaogera faha-6 ao Jordania.